BamBayda Muusikada – Horseed Sports Club
Goor dhaw la soco taariikhda xidiga hada u dheela kooxda horseed ee ciidanka xooga dalka
Aqristayaasheena sharafta leh mar dhaw waxaan idin soo gudbidoonaa taariikhda mid ka mid ah xidigaha hada u dheela kooxda horseed ee ciidanka xooga dalka isbuucii mar ayaan idin soo gudbin doonaa taariikhda xidigaha hada u dheeli doonaa. Waxaana diirada kusaari doonaa Xidigaha kooxda taariikhda halka uu kubada uu kasoo bilaabay maxoo xiiseeyaa xidiga dhanka cuntada
Leicester City oo sii dheeresatey hogaanka Horyaalka Premier League
Kooxda Kubada cagta Leicester City ayaa sii dheereysatay Hogaanka Horyaalka dalka England kadib markii ay 1-0 kaga badiyeen Watford iyaga oo hada Hogaanka ku haya 5 dhibcood oo Nadiif ah. Leicester City 12 bilood ka hor Waxa ay ka bad baaday in ay u laabato Heerka labaad laakiin hada Waxa ay u muuqataa Naadi qaadi
4 tii goal ee shaley uu dhaciyay CR7 oo rikoor cusub dhigey
Kadib markii uu dhaliyey 4 Gool Xidiga Real Madrid Cristiano Ronaldo ayaa Goolashaas Waxa lasoo saaray Waxa ay kusoo kordhiyeen Taariikhda Goolasha uu horay dhaliyey iyo Waxa ay ka dhignaayeen. Cristiano Ronaldo Waxa uu dhaliyey Sadexleeydiisii 30 aad ee uu kadhaliyo Kulamada Horyaalka La Liga intii uu ka dheelayey sidoo kalana waxa uu ka mid
Magaca Adam Johnson oo laga Saaray ‘FIFA 16’
Cayaaryahankii hore ee Xulka qaranka England ‘FIFA 16’ ayaa laga Saaray Geymka Caalamiga ah ‘FIFA 16’ kadib markii lagu helay dambi ah in uu Fara Xumeeyey gabar yar oo aan qaan gaar ahayn. Afhayeen u hadalay Xiriirka kubada Cagta Caalamka FIFA ayaa sheegay in laga Saaray Geymka ‘FIFA 16’ Waxaana looga Saaray in la ilaaliyo
Waxaa Maanta lamagacaabay Xulka qaranka dalka Uruguay iyada oo markii koowaad lagu Daray Weeraryahanka Naadiga Barcelona ee Luis Suarez kaas oo aan dalkiisa u dheelin tan iyo markii laganaaxay 2014 kii. Luis Suarez ayaa lagu Ganaaxay kadib markii uu Garabka ka qaniinay Cayaaryahanka daafaca uga dheela Xulka Talyaaniga Giorgio Chiellini Waxaana uu ka maqnaa dhamaan
Finalada Koobabka Champions League iyo Europa League oo loo isticmaalidoono in Goal-line technology
Xiriirka kubada Cagta qaarada yurub ayaa isku Raacay in Finalada Koobabka Champions League iyo Europa League loo isticmaalo aalada loo yaqaan Goal-line technology. UEFA ayaa shir ay isugu yimaadeen Maanta Waxa ay isku raaceen in ay lagama maarmaan tahay in aaladaas oo aad loola dhacay isla markaana yaraysey Murankii Goolasha Garsoorayaashu arki Waayaan marka ay
Wax badan oo ku saabsan kulanka adag ee darbi London ka ogow
Waxaa Galabta ladheeli doonaa kulanka ugu Xiisaha badan Kulamada Loo yaqaan London Darbi ee ay dheelaan kooxaha degan Caasimada England kaas oo u dhaxeeya Naadiayada kala ah Tottenham iyo Arsenal Kulankaan oo ilgoonin ah lagu hayo maadaam labada koxood midkastaahi ay dooneyso in ay qaado Horyaalka ayaa Waxa uu bilaaban doonaa Saacada muqdisho marka ay
Maxaa kala heesta Chelsea iyo Stoke City
Waxaa Maqribnimada sabtiga ladheeli doonaa kulan aad u xiiso badan oo u dhaxeeya kooxaha kala ah Chelsea iyo Stoke City kaas oo ah mid kamid ah Kulamada la Xiiseeyo ee Horyaalka dalka England. Kulankaan ayaa labaasan doonaa 6-00 Maqribkii. Garsooraha Mark Clattenburg Cayaartoyada ay u badan tahay in lagu soo bilaabo Garoonka labada kooxoodba. 845
Man City oo heshiis la gaartey xidig u dheela Borussia Dortmund
Wararka laga helayo dalka Jarmalka Cayaaryahanka kooxda kubada Cagta Borussia Dortmund Ilkay Gundogan ayaa heshiis rasmi ah lagaaray kooxda Manchester City Waxaana Xidigaan aad u doon doonayey kooxo badan oo Talayaani ah sida Juventus oo kale. Ilkay Gundogan oo dhawaan diidey in uu heshiis cusub u Saxiixo kooxdiisa ayaa lasheegayaa in Macalinka dhawaan lawareegi doona
FIFA oo soo saartey qiimeynta bilaha halkee ee soomaaliya ka jirtaa qiimeenta
Xiriirka kubadda cagta adduunka ayaa soo saaray qiimeynta billaha xulalka adduunka waxaana kaalinta koowaad laga saari la’yahay xulka Belgium, iyadoo 10-ka xul ee u sarreysa uusan isbedel wayni ka jirin. Xulka Argentina ayaa weli ku jirta kaalinta labaad, halka Spain ay saddexaad ku jirto, xulka Jarmalka ee haysta Koobka Adduunka ayaa ku jira kaalinta afaraad,